भारतीय क्रिकेटरलाई कपिल देवको आरोप “देश महत्वपूर्ण कि आईपीएल ? | KhelNepal
९ वर्षपछि पहिलो पटक आईसीसीको प्रतियोगितामा सेमीफाइनल पुग्न असफल भएपछि भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान कपिल देवले देशको क्रिकेटरहरुले राष्ट्रिय टिम भन्दा आईपीएललाई महत्व दिएको आरोप लगाएका छन्।
“जब खेलाडीहरुले देश भन्दा आईपीएललाई महत्व दिन्छन् तब के भन्न सकिन्छ ? खेलाडीहरुले आफ्नो देशको लागि खेल्न गर्व गर्नुपर्छ। मलाई आर्थिक अवस्थाबारे थाहा छैन त्यसैले धेरै भन्न सक्दिन।” ६२ वर्षीय पूर्व कप्तानले एबिपी न्युजसंग कुराकानीमा बताए।
“मलाई लाग्छ फ़्रेन्चाइज् भन्दा देशको टिम पहिले आउछ। मैले आईपीएल नखेल्न भनिरहेको छैन तर भारतीय क्रिकेट बोर्डको जिम्मेवारी हो राम्रो योजना बनाउने।” आईपीएल कोभिड-१९ का कारण सर्दा भारतीय टिमले आईपीएल लगत्तै विश्वकप खेलेको थियो। “यो असफलताबाट हामीले पाठ सिकेर गरेका गल्ति दोहोर्याउनु हुँदैन। यो सबैभन्दा ठूलो सबक हो।” उनले थपे।
अर्का पूर्व भारतीय क्रिकेटरले पनि लगातार बायो बबलमा क्रिकेटर हुँदाको थकानले भारतको प्रदर्शनमा असर पारेको बताएका छन्। उनले बताए – “बायो बबलको थकानले ठूलो भूमिका खेल्यो। यसलाई बहाना बनाउनु हुँदैन। याद गर्नुस भारत-न्युजिल्यान्ड बीचको खेल। जब न्युजिल्यान्ड ब्याट्सम्यानहरु प्रहार गर्दै थिए तब बल मैदान बाहिर पुगीरहेको थियो तर जब हाम्रो खेलाडीहरु प्रहार गर्दै थिए बल फिल्डरको हातसम्म मात्र पुगीरहेको थियो। उनीहरु थकित थिए त्यसमा कुनै शंका छैन।”
“उनीहरु आईपीएल खेले लगत्तै विश्वकप खेल्न पुगे। त्यसअघि इंग्ल्यान्डसंग टेस्ट सिरिज खेल्दै थिए। त्योनै समस्या थियो ? उनीहरुले आईपीएल छोड्न सक्नुपर्थ्यो। विश्वकप अघि आराम गर्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ खेलाडीहरुले आफ्नो लागि के बढी महत्वपूर्ण छ निर्णय गर्नुपर्छ। विश्वकप या आईपीएल कुन महत्वपूर्ण हो ? यो एउटा सिरिज मात्र हैन यो त विश्वकप हो।”
मदन लालले हार्दिक पान्ड्याको फिटनेस माथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरे – “उनि फिट छन् कि अनफिट ? बलिंग गर्छन् कि गर्दैनन् ? यो दोधार हुनु सहि कुरा हैन।”
उनले रोहित शर्मालाई न्युजिल्यान्ड बिरुद्ध तेश्रो नम्बरमा पठाउने निर्णयको पनि बिरोध गरे। “जसले पनि यो निर्णय लिएको हो गलत थियो। रोहित लगातार ओपनिंगमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनलाई त्यो स्थानबाट कसरि हटाउन सकिन्छ। त्यसले बिराटको ३ नम्बर स्थान परिवर्तन भयो। शार्दुललाई भुवनेश्वरको स्थानमा खेलाउनु भलै राम्रो निर्णय थियो। मलाई थाहा छैन लेग स्पिनर राहुल चहारलाई किन खेलाईएन ? लेग स्पिनर यो प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण सावित हुन सक्थ्यो।” उनले थपे।